कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं – अध्यक्ष जिसी | माण्डवी एफएम
प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र ३०, सोमबार १२:५१
प्यूठानका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये प्यूठान जिल्ला सदरमुकामबाट उत्तरी भागमा झिम्रुक गाउँपालिका पर्दछ । ओखरकोट मच्छी बजार यहाँको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो । हालसम्म योे गाउँपालिकाभित्र कालोपत्रे सडक निर्माण नभए पनि वाग्दुला भिमगिठे सडक र मदन भण्डारी मार्गको निर्माण भएमा यो गाउँपालिकाको सडक यातायातको पहुँचलाई वृद्धि गर्ने देखिन्छ । बाग्दुला भिमगिठे सडकले करिव बीच भागवाट यो गाउँपालिकालाई चिरेको छ । महाभारत श्राृंखलामा फैलिएका यहाँका पहाडी भिरालो बस्ती फलफूल खेतीका लागि उपयुक्त भएपनि अहिलेसम्म व्यवसायिक फलपूmल खेती हुन सकिरहेको छैन । बैदेशिक रोजगारबाट आएको विप्रेषण र निर्वाहमूखि कृषि पशुपालनबाट आएको रकमबाट यहाँका वासिन्दाहरुको दैनिक जनजीवन निर्वाह भइरहेको देखिन्छ । अन्य स्थानीय तहजस्तै यस गाउँपालिकाको पनि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक विकासदेखि लिएर कृषि र पशुपालनको व्यवसायिक विकास यथोचित हुन सकिरहेको छैन । यसै परिवेशमा विगत २ वर्षदेखि झिम्रुक गाउँपालिकाको समग्र विकासमा योगदान पु¥याउने प्रतिवद्धताकासाथ झिमु्रक गाउँपालिका अध्यक्षको कार्यभार सम्हालीरहेका तिलक जिसीसँग पत्रकार सञ्जय रिजालले गरेको बिस्तृत कुराकानीको सार संक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ ।–
मेरो जन्म २०२३ सालमा साविक बांगेमरोट गाविस वडा नं. ५ बौडा भन्नेमा म जन्मिएको हुँ ।
अध्ययन कुन विद्यालयबाट शुरु गरेर कहाँसम्म पु¥याउनुभयो ?
खाडीचौरबाट शुरु गरेर अहिलेको लक्ष्मी मावि विद्यालयमा १,२,३, सम्म अध्ययन गरे त्यसपछि ४ बाट वालशिक्षा माध्यमिक विद्यालय ओखरकोटमा पढे त्यहीबाट एसएलसी गरेर मैले आइ एल सम्मको शिक्षा लिएको छुँ ।
यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चामै लामो समयदेखि संलग्न हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चामै लाग्न यहाँलाई के कुराले प्रेरित ग¥यो ?
राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो देशका सबै अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्ने उपाय भनेको नौलो जनवादी व्यवस्था हो । हुँदै समाजवाद र साम्यवादमा पुग्नुपर्दछ । त्यसो गरिएन यो देशका कुनै पनि समस्याहरु समाधान हुन सक्दैनन् । आम जनताको मुक्ति नै समाजवाद र साम्यवाद हो भन्ने कुराहरु यो पार्टीले आत्मसाथ गरेको, यो नै मानव जातीको उच्चतम व्यवस्था हो भन्ने लाग्यो । कुनै पनि मान, सम्मान प्रलोभनमा नझुकिकन लगातार जनताका कुराहरु उठाइरहेको हुनाले मलाई त्यो चित्त बुभ्mयो त्यसकारण म जनमोर्चामा लागिरहे ।
शिक्षा क्षेत्रका समस्या सुधारको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याउनुभएको छ ?
हामीले पहिलो नजर शिक्षामै लगाएका छौं । शिक्षाको विकास नभएसम्म समग्र विकास हुन सक्दैन भन्ने सोचेर हामीले सबै विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुलाई हामीले भेला गरेर सिकाइ उपलव्धी हासिल गर्न नसक्नुको कारण, दिनप्रतिदिन सरकारी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरु कम हुनुको कारण के हो भनेर समस्या पहिचान गर्नको लागि हामीले छलफल ग¥यौं । त्यो छलफलको आधारमा हामीले शिक्षाका समस्या समाधान गर्न र शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्न एउटा कार्यदल बनायौं । यो कार्यदलले सबै विषयलाई अध्ययन ग¥यो । अध्ययनपश्चात् हामीलाई एउटा प्रतिवेदन दियो ।
शिक्षामा के कस्ता समस्याहरु रहेछन् ?
भौतिक पूर्वाधारको समस्या, आर्थिक समस्या, शिक्षकको पर्याप्त दरवन्दी नभएका लगायतका कुराहरु प्रतिवेदनमा देखिए । नीजि श्रोतका शिक्षकहरुलाई पनि १२ सय १५ सय दिएर पढाउन लगाएको देखियो । यी समस्या देखिएपछि पहिलो वर्ष नै हामीले शिक्षामा १ करोड २० लाख छुट्टायौ । अहिले हामीले १ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेका छौं ।
त्यो बजेट कुन कुन कुरामा खर्च गर्नुभयो ?
विद्यालयमा शिक्षक अप्रयाप्त भएकोले मावि, निमावि र प्रावि विद्यालयमा ६० शिक्षक दरवन्दी थप्यौ । सिकाई उपलव्धीमा राम्रो अंक लिने शिक्षकहरुलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौं । एसइइ मा प्रथम हुने विद्यालयलाई हामीले दुई लाख रुपैया, द्वितीय हुनेलाई एक लाख रुपैया र तृतीय हुनेलाई ५० हजार रुपैया पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरेका छौं । त्यस्तै आठ कक्षामा पनि पालिकास्तरमा प्रथम हुनेलाई एक लाख, द्वितीय हुनेलाई ५० हजार, तृतीय हुनेलाई २५ हजार त्यस्तै प्राविमा ५ कक्षामा पनि प्रथम, द्वितीय र तुतीय हुनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौं । विद्यार्थीतर्फ पनि सबै तहका प्रथम, द्वितीय र तृतीयलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेका थियौ । विद्यालयको नियमित अनुगमन गर्ने, लापरवाही भएको विद्यालयमा सुझाव दिने, चेतावनी दिने यदि नियम पालना नगरेमा शिक्षकको तलवसम्म रोक्का गर्ने कार्यविधि हामीले बनाएका छौं । हामीले कार्यविधि अनुसार हामीले यस क्षेत्रमा काम गरिराखेका छौं । समग्रमा शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ । गाउँपालिकाको कार्यालयले मात्र शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी सबैको संयुक्त प्रयास जरुरी छ ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि धेरै समस्या देखिन्छ । गाउँपालिकामा एउटा पनि अस्पताल छैन । सामान्य स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि समेत प्यूठान अस्पताल आउनुपर्ने अवस्था छ । यस किसिमको समस्यालाई कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?
स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरी मच्छीमा एउटा इलाका स्वास्थ्य चौकी छ । त्यसलाई स्तरोन्नती गरेर १५ शैयाको अस्पताल अस्पताल बनाउने भनेको हामीलाई जग्गा उपलव्ध हुन सकिराखेको छैन । हेल्थपोष्ट भएको ठाउनेर हामीले जग्गा खोज्ने धेरै प्रयत्न ग¥यौं । किन्नको लागि पनि प्रयत्न ग¥यौ तर जग्गा नपाइएकोले हामीले थप भवन बनाउन सकिराखेका छैनौ हाम्रो गाउँमा एउटा ल्याव परीक्षण थिएन अहिले ल्याव परीक्षणको व्यवस्था गरेका छौं । अस्पतालको भवन निर्माणको लागि नीजि जग्गा नपाइसकेपछि हामीहरुको सेवा केन्द्रको जग्गा छ त्यो साविकको जिविसको नाममा छ । त्यसलाई हाम्रो मातहतमा ल्याएर त्यही भए पनि हामीले अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने सोचेका छौं । सरकारले जुन औषधिहरु पठाइरहेको थियो, त्यो औषधि अप्रयाप्त भएको हुँदा गतसाल पनि २० लाख विनियोजन गरेर टेण्डरमार्फत हामीले औषधि खरीद ग¥यौं । अहिले हामीसँग प्रशस्त औषधिहरु छ । अहिले हामीसँग औषधि अभाव छैन । अहिले हाम्रा तीनवटा वडाहरु नयाँ बनेका छन् । यी वडामा स्वास्थ्य संस्था छैन । ४, ३, ८ वडामा स्वास्थ्य संस्था छैन । यसलाई नेपाल सरकारको नीति अनुसार नभएको ठाउँमा दिने भनिराखेको छ त्यसैले हामीले पर्खिरहेका छौं । यदि त्यस्तो नभएको भए हामीले अस्थायी रुपमा भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ कि भनेर बजेट विनियोजन पनि गरेको हो । ८ नम्वर वडा अत्यन्त विकट भएकोले त्यहाँ अस्थायी रुपमा भएपनि स्वास्थ्य सेवा दिने भनेर हामीले बजेट छुट्याएका थियौं । जिल्लासँग सबै सँग सल्लाह गर्दाखेरी अहिले तपाई नहतारिनोहोस्, अब तुरुन्तै कोटाहरु आउँदैछ त्यो आयो भने त्यसैमार्फत गरौला भन्ने सुझाव आएको हुनाले हामीले अहिले कार्यान्वयन गरेका छैनौ । महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुलाई प्रोत्साहनस्वरुप विभिन्न सुविधाहरु दिइरहेका छौं ।
कुषि र पशुपालनको व्यवसायीकरण गर्न त्यसबाट आम्दानी बढाउन यहाँहरुले के कस्तो कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनुभएको छ ?
गाउँमा जागरुक युवाहरु नभएको कारण सामुहिक रुपमा ठूलै फर्म खोल्न हामीहरु असफल भएका छौं । अहिले गाउँमा समूहहरु गठन गर्ने, ८÷१० वटा वाख्राहरु पाल्ने, त्यो खालको हामीले प्रचार प्रसार पनि गरिराखेका छौं । त्यसमा हामीले बोका अनुदान दिने, खोर सुधारको लागि केही पैसा दिने, औषधि उपचारको लागि पनि केही पैसा दिने गरिराखेका छौं । त्यसकारण अहिले केही समूहहरु अगाडि बढेको छ । तर कृषितिर हामीले सोचेको के हो भन्दाखेरी धेरै जग्गाहरु एकैठाउँ पलटिङ्ग गरेर एउटा फर्मको रुपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर धेरै छलफल अगाडि बढायौ । तर समस्या के भइदियो भने काम गर्ने मान्छे भइदिएन । १८ वर्ष पुगेपछि युवाहरु पासपोर्ट बनाउन थाल्छन् । गाउँमा कि भर्खर पढ्न लागेका विद्यार्थी छन् कि बुढाखाडा छन् । हरेक गाउँमा अहिले युवाहरु भेटिन्न । सबै विदेशको मोहमा गयो । त्यसले गर्दाखेरी हामीले सोचे अनुसार काम अगाडि बढाउन सकेनौ । हामीले के सोचेका थियौ भने । अहिले गाउँपालिकाले ५० लाख लगानी गरेर भाडामा जग्गा लिएर, गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिकहरुलाई त्यसमा निगरानी गर्न लगाएर हामीले ज्यालादारी मान्छे राखेर भए पनि एउटा तालिम केन्द्र जस्तो फर्म केन्द्र खोलौ भन्ने सोचेका थियौ । अहिले हामीसँग त्यो पैसा अभाव भयो । आगामी वर्षको लागि हामीले त्यस्तो अवधारणा अनुसार काम गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । हामीले यसरी काम अगाडि बढायौ भने कृषकहरु आकर्षित भएर समूह बनाएर, सहकारी बनाएर व्यवसाय गर्न अगाडि बढ्थे कि भन्ने उद्देश्यले हामीले यसो गर्न खोजेको हो ।
गाउँपालिकामा कृषि तथा पशुपालनको प्राविधिक प्रयाप्त छैनन् भन्ने गुनासो बेला बेलामा आइरहन्छ । तपाइहरुको अवस्था कस्तो छ ?
हामीसँग कृषि प्राविधिक जेटिए हरु छन् समस्या परेको ठाउँमा हामीले खटाएका छौं । उहाँहरु जानुभएको छ । सेवा दिइरहनुभएको छ । खोजेकै समयमै त नहुन सक्छ तर ढिलो चाडो प्राविधिकहरु समस्या परेको ठाउँमा पुगिराखेका छन् । यसकारण त्यति बढि प्राविधिकको समस्या छैन ।
युवाहरुलाई स्थानीय स्तरमै आकर्षित गर्ने विभिन्न प्रयासका बावजूद यहाँले अघि भने जस्तै धेरै युवाहरु अहिले बैदेशिक रोजगारमा गइराखेका छन् । वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी प्रर्याप्त चेतनाका अभावका कारण कतिपय युवाहरु ठगिएका पनि छन् । बैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई ठगिनबाट जोगिने जानकारीमूलक सचेतनामूलक कार्यक्रम गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने केही योजना बनाएको छ ?
हाम्रो भनाइ त के हो भने विदेशमा जानै हुँदैन भन्ने हो । हामीले अहिले चुहिने भाडोमा पानी हालिराखेका छौं । त्यो भरपर्दो होइन । हामी विदेश जान हुन्न । तपाइहरुले यही काम गर्नुहोस् । त्यसमा हामीले सहयोग गर्छौ । यही उत्पादनमा लाग्नुहोस । भनेर हामीले भनिराखेका छौं । ल आउनुहोस् हामी शीप सिकाउँछौ, तपाई विदेश जानुस् भनेर त्यसरी हामीले भनेका छैनौ । तर ठगिनबाट जोखिने किसिमका सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हामीलाई अहिलेसम्म प्रस्ताव आएको छैन । त्यस किसिमको प्रस्ताव आएमा त्यस किसिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
खानेपानीको समस्या समाधानको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरु यहाँहरुले अगाडि बढाउनुभएको छ ?
हामीले स्थानीय स्तरमा गर्न सक्ने खानेपानीका योजनाहरु हामीले अगाडि बढाएका छौं । हामीले गर्न नसक्ने योजनाहरु प्रदेशमा पठाएका छौं । संघमा पनि पठाएका छौं । अहिले संघ प्रदेशबाट केही योजना सञ्चालन गर्ने भनेर नामाकरण भएको छ । त्यसको पनि बिस्तारै व्यवस्था हुन्छ ।
अहिले कति घरधुरीलाई पानी पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता छ ?
सरकारको एक घर एक धाराको नीति अनुसार त पानी पु¥याउन समस्यै छ । अहिले सरकारले एक घर एक धाराको नीति अपनाएको छ । माथि डाडा डाडामा पनि सम्भावना देखिन्न । ४÷५ घरले एउटा धारा प्रयोग गर्नपर्ने देखिन्छ । लिफ्टबाट पानी तानेर घर घर धारा राख्ने मान्छेको क्षमता पनि कति हुन्छ ? त्यो अध्ययनको विषय भयो । खानेपानी पिउनै नपाएर त्यस्तो समस्या भएको अवस्था पनि हैन । ८÷१० मिनेट लगाएर गाग्रीमा बोकेर भएपनि मानिसले निर्वाह गरेको छ । तर प्रयाप्त छ्यालव्याल पानी छैन ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग कस्तो खालको सहकार्य गाउँपालिकाले गरिराखेको छ ?
हामीले शुरुमा उहाँहरुलाई बोलाएर छलफल चलायौ । तपाइहरुले बन संरक्षण गर्नुपर्छ । आएका समस्याहरु तपाई हामी मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि भयो । वनको कार्यालयलाई पनि हामीले बोलायौ । तपाईले पनि हामीसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराकानी भयो । तर वनले अहिले संघ मार्फत प¥यो । त्यति हामीलाई वास्ता पनि गरेको छैन । योजनावद्ध नभए पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले हामीले भने अनुसार काम गरिराख्नुभएको छ । सहकार्य राम्रो रहेको छ ।
बाग्दुला भिमगिठे सडक र मदन भण्डारी मार्ग बाहेक गाउँपालिकाको सडकको अवस्था कस्तो छ ?
हिउँदे बाटो जताकतै गएको छ । वडा नं. ७ र ८ मा वर्षादको सिजनमा पनि गाडी चल्न सक्ने अवस्था हो । तर पुल नभएको कारणले वर्षामा गाडी जादैन । बाटाहरु राम्रा बनेका छन् । बादिकोटमा पनि वर्षामा पनि गाडी लगातार चलिराखेको छ । ओखरकोटमा अझै हामीले बस लान सकिराखेका छैनौ । यो साल लैजान्छौ । किनभने बाटो अलि साघुरो भएको कारणले गतसाल हामीले पूरा गर्न सकेनौ । यसपाली हिउदमा ओखरकोटमा बस लैजाने योजना बनाएका छौं । हामीले गाउँपालिकाको वरिपरिबाट एउटा रिंगरोडको निर्माण गरिराखेका छौ. । दहखोलाको माथि मर्कावाङबाट चुधारा हुँदै बांगे गौडा हुँदै पोखरी हिटडाडा बादिकोट, टिमुरचौर, तुषारा, कुटिचौर झरेर मर्कावाङमा जोडिने हो । धेरैजसो ठाउँमा यो सडक पूरा भैसकेको छ । केही ठाउँ बाँकी छ त्यो पनि एक दुई वर्षमा पूरा हुन्छ ।
सडक निर्माण गर्दा जथाभावि मेशिनहरुको प्रयोगले विपद्को जोखिम पनि बढाएको भनेर धेरै चर्चा हुने गरेको छ । यहाँको गाउँपालिकामा कस्तो बेलामा मेशिन प्रयोग गर्ने भन्ने केही नीतिहरु बनाउनुभएको छ ?
सडक निर्माणको क्रममा वनहरु त हाम्रो त्यति बढी नाश भएको छैन । जे जति भएको छ ती भैहाले । मान्छेका नीजी जग्गाहरुबाट नै बाटो गएको छ । सार्वजनिक जग्गाहरुबाट एकदम कम छ । हामीले एउटा नीति त बनाएका छौं तर के गर्ने त्यही नीति अनुसार जाने हो भने बाटो पनि नखनिने । केही गर्न पनि नसकिने । त्यसकारण नढाटीकन भन्दाखेरी आँखा चिम्म गरेर पहिले बाटो बनाउँ त्यसपछि विरुवा रोप्ने हरियाली गराउने काम गरौला भनेका छौं । हामीले उपभोक्ताहरुलाई बाटोको डिलमा विरुवा रोप्न लगाइरहेका छौं ।
गाउँपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन कसरी गरिराखेको छ ?
हामीले यहाँको फोहोरमैला व्यवस्थापनको डम्पिङसाइट बनाएका छौं । र केही समय अघिदेखि त्यहाँ फोहोर फाल्न रोकिएको छ । त्यहाँ पुग्ने बाटो भत्किएको र टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएर अर्को महिनादेखि हामीले फेरि शुरु गर्छौ । गत साल हप्ताको एकदिन फोहोर उठाउने गरेका थियौ । तर अहिले गाउँपालिकावासीको चेतनाको वृद्धि भएसँगै जथाभावि फ्याकिने फोहोर संकलन हुन थालेकोले अब हप्ताको दुई दिन फोहोर उठाउने काम गर्दै छौ ।
गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीले पालिकाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदछ । तर पालिकावासीहरुको कर धेरै भयो भन्ने गुनासोहरु आउने गरेको हुन्छ । यहाँको पालिकाको अवस्था कस्तो छ ?
हामीले धेरै कर लगाएका छैनौ अरु गाउँपालिकाको तुलनामा । कतिपय कुरामा हाम्रो बढि होला कतिपय कुरामा हाम्रो कम होला त्यस्तै सरदरमा त्यस्तो बढि छैन । हिजो साविकका गाविसहरुले उठाएकोमा हामीले त्यस्तो धेरै बृद्धि गरेका छैनौ ।
गरीवीलाई समेट्ने कार्यक्रम स्थानीय तहले ल्याउन सकिराखेका छैनन् भन्ने गुनासो आइरहेको छ । यहाँको पालिकाको अवस्था कस्तो छ ?
गरीव केही न केही गर्छु भनेर त आउनु प¥यो नि । गरीवहरुले म बाख्रा पाल्न तयार छुँ । म कृषि खेती गर्न तयार छुँ । म केही उद्यम गरेर आम्दानीको श्रोत बढाउन तयार छुँ भनेर गरिवहरु आउनुप¥यो । हामीले आव्हान पनि गरिराखेका छौं । आउनुहोस्, त्यस्ता योजनाहरु बनाउनुहोस् । हामी तपाईहरुलाई सहयोग गर्छौ । भनेर भनिराखेका छौं । तर हाम्रो बुझाई कस्तो भयो भन्दाखेरी माछा मार्न नसिक्ने माछा मारेर खान दिने । खालको हाम्रो यो बुझाइ भयो । अहिले देशभरी तलदेखि माथिसम्म जो बितरणमुखी बजेट आइराखेको छ यो बजेटले देशलाई कहाँ पु¥याउने हो ? देशको अवस्था कस्तो हुने हो ? यो चिन्ताको विषय छ । अहिले मान्छेको सोचाइ धारणा पनि के भएको छ भन्दाखेरी अब पुरै सरकारले गरिदिनुपर्छ, सरकारले दिनुपर्छ । यो सरकारको जिम्मा हो भन्ने अवस्था जुन सिर्जना भयो । यो झिम्रुक गाउँपालिका मात्र होइन समग्र देशकै समस्या हो । त्यसकारण हाम्रो भनाइ भनेको के हो भने मान्छेहरु निस्कृय हैन । मान्छेहरुलाई सकृय बनाउनुपर्छ । मान्छेहरुलाई श्रमजीवी बनाउनुपर्छ । श्रममा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ । त्यो श्रम गर्ने क्रममा आइपरेका समस्याहरुलाई हामीले टेवा दिने हो । तिनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । त्यसको लागि हामीले वार वार माग गरिराखेका छौं । योजना ल्याएर आउनुहोस् । कार्यक्रमको काम गर्नुहोस् । तर मान्छेहरु उत्साहित छैन । काम केही गरेको छैन त्यतिकै अनुदान माग्छ । गरीवी अन्त्यका लागि सरकारले मात्र गरेर हुँदैन आफै पनि श्रममा लाग्नुपर्दछ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनुभएको छ ?
पर्यटन भनेकै के हो भन्ने हाम्रो बुझाइमा उही ठूला ठूला हिमाल, ताल तलैया हुन् भन्ने हो । त्यो बुझाई मात्र हैन रहेछ पर्यटन । पर्यटन भनेको जंगल पनि रहेछ । बस्ती पनि रहेछ, खेती किसान पनि रहेछ । बाटाघाटा यी सबै कुराहरुको विकास भने पर्यटनसँग जोडिए । त्यसकारण ओखरकोटमा पनि हामीले एउटा पुरातात्वीक महत्वको कोट छ । त्यो कोटमा जानको लागि अहिले एउटा सिढी बनाएको हो । त्यो पनि अझै अधुरो छ । त्यो पूरा गर्न बाँकी छ । अर्को खेल मैदान बनाइरहेका छौं । हामीसँग जग्गा उपलव्ध नभएकोले पार्कहरु बनाउन सकिराखिएको छैन । सामुदायिक होमस्टेको भवन बन्दै छ त्यो पनि अपुरो छ । हामीे अहिले ढाडमा रक गार्डेनको लागि २० लाख खर्च गरेर गुरु योजना बनाएका छौं । त्यसको २२ करोडको स्टीमेट आएको छ । त्यसको निर्माणको लागि हामी बजेट माग गर्न पनि गइराखेका छौं । अहिले केन्द्रले ५० लाख दिएको छ । विगत वर्ष २५ लाख दिएको थियो । हाम्रो डिपिआर बन्न ढिला गरेको कारणले त्यो सबै पैसा खर्च गर्न सकिएन । १० लाख मात्रै खर्च गरियो । एउटा ढुंगा विछ्यार सिढी सहितको राम्रै गोरेटो बाटो बनाएका छौं । अब त्यो डिपिआरको आधारमा स्टिमेटर गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउने योजना छ । स्नाथान परिमार्जित गर्ने, सिढिहरु, पोखरी बनाउने कामहरु भएका छन् । दियाल्नाचौरमा खेल मैदान निर्माण भइराखेको छ । भ्यु टावर निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । तुषाराकोटमा पनि चौपारीहरु निर्माण गरिएको छ । त्यहाँको मन्दिर पनि नया तरिकाले बनेको छ । पर्यटनको पूर्वाधार हामीले तयार गर्दै छौ । सम्पन्न हुन त केही समय लाग्ला । हामीले एउटा सोच बनाएका छौं कति पूरा हुने हुन् कति होइनन् ।
यहाँलाई भन्नै मन लागेको यस अघि हाम्रो कुराकानीमा नसमेटिएको कुरा भए भन्नुहोस् ।
कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामीले सिचाइ सुविधा विस्तार गर्न धेरै कुलाहरु निर्माण गरेका छौं । टारी खेतहरुमा पनि हामीले कुला बनाएका छौं, जसले गर्दा मानिसहरुले अहिले सजिलै सिंचाइ गर्न सकेका छन् ।
त्यसले गर्दाखेरी मानिसलाई धेरै राम्रो प्रभाव पनि परेको छ । हाम्रो ठूलो योजना भनेको दारिमचौरको सिचाइ कुलो हो । त्यो करिव ९० लाखको योजना हो । त्यो प्रदेश र हामी मिलेर समपुरक योजनामा पोहोर साल ४० लाख रुपैयाको काम भयो अहिले ५० लाख रुपैया छ । यो साल त्यसलाई सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै अरु सानातिना धेरै कुलाहरु हामीले बनाएका छौं । सिचाई पाइप पनि खरीद गरेर हामीले किसानहरुलाई वितरण गरेका छौं ।
२०७८ असार ३१, बिहीबार १३:१२
२०७८ असार ३०, बुधबार १४:०२
२०७८ असार ३०, बुधबार १३:२३